39 Astaamo Hal abuur leh Fariimo qarsoon | Abuurista khadka tooska ah
Nakhshadeynta astaan ​​waa mid aad u dhib badan laakiin sameynta mid dadka ka dhigeysa inay afkooda si dhab ah u furan yihiin weji lala yaabayna ay ka sii dhib badan tahay. in kasta oo aan kuu xaqiijin karo in qaar badan oo kontonkan ahi ay guuleystaan.
Dhammaantood waxay ka siman yihiin wixii dhaafsiisan inay wax noogu soo gudbiyaan astaan ​​ama adeeg, waxay sidoo kale wataan farriin subliminal ah ama macno labaad oo si dhakhso leh loo arko waana waxa lala yaabo.
Boodo ka dib.
1 1. Qaabka Biyaha
2 2. Ilmaha Onlineka ah
5 5. Jacaylku Wuxuu Noqon Karaa Kuwo Doorto
7 7. MAHADSANID
8 8. Dhakhtarka webka
9 9. XIKMAD LEH
10 10. Dukaan Yar
11 11. Rock'n Taariikhda
12 12. Jacaylka Kanada
13 13. Baaritaanka indhaha
14 14. Dhisme
15 15. Kubbadda Cagta
17 17. Soosaarida Rakaabka alt
18 18. Waan jeclahay turubka
19 19. 4ta T ee
22 22. Macluumaadka Plaza
23 23. Noame
25 25. Guriga kalluunka
28 28. Farxadda Nolosha
29 29. Filimada Hotelada
30 30. Raadiyaha Degdega ah
31 31. Xusuusin qurux badan
32 32. Sikastaba
33 33. Studio Nive Yoga
34 34. Xalka Hal abuurka
35 35. MAYA: ADIGA: ANIGA
36 36. Daryeelka Caafimaadka eeyga
38 38. Kalluumaysiga Smart-ka ah
39 39. Mas
1. Qaabka Biyaha
Logo loo sameeyay adeegga gaariga lagu dhaqo.
2. Ilmaha Onlineka ah
Logo loogu talagalay bogga internetka ee ku saabsan ilmaha iyo walxaha.
3. saytuun ah
Logo loo sameeyay kafateeriyada.
4. Midabka midabka leh
5. Jacaylku Wuxuu Noqon Karaa Kuwa Doorta
Astaantan waxaa loo sameeyay barta shukaansiga ee internetka.
Logo u eg shark
Logo loogu talagalay la talinta qaabeynta.
8. Dhakhtarka webka
Naqshadeynta astaanta loogu talagalay naqshadeynta websaydhka iyo cusboonaysiinta.
9. XIKMAD LEH
Cajaladahaani waxay u eg yihiin guumays tan oo magaca ayaa xigmad leh.
10. Dukaanka Kid
Logo dukaanka internetka, meel loogu talagalay naqshadeeyayaasha, oo u sameeya alaabada carruurta qaarkood.
11. Taariikhda Rock'n
12. Jacaylka canada
13. Baaritaanka indhaha
Waxay ku saabsan tahay dhismaha ereyga "dhisme".
15. Kubbadda Cagta
Shirkadda horumarinta shabakadda.
17. Soosaarida Rakaabka alt
Rakaabka waa shirkad hal abuur leh oo u shaqeysa warbaahin kala duwan si ay u gudbiso sheekooyin si wanaagsan loo farsameeyay oo ku saabsan ganacsiga, u doodista iyo madadaalada.
18. Waan jeclahay turubka
Ku calaamadee goobta turubka internetka.
19. 4ta T
Logo loogu talagalay koox maxalli ah oo aan faa'iido doon ahayn.
20. Baarkinka Muddada Dheer
Astaanta tartanka (naadiga isboortiga). Guul 1 boos.
22. Faahfaahinta Plaza
Astaanta dukaanka buugaagta ee internetka.
25. Guriga kalluunka
Makhaayada kaluunka / qaadashada. Sida buskud yar oo iibiya noocyo badan oo kalluun ah.
Faylka wadaagista faylka.
28. Farxad Nololeed
Logo loogu talagalay wakaaladda shukaansiga.
29. Filimada Hotelka
Tani waxay ahayd uun fikrad, ka dib markii astaan ​​kale ay xumaatay, waxay noqotay tan.
30. Raadiyaha Degdega ah
Tani waxaa loogu talagalay bogagga shabakadda Yellow Pages / Google.
31. Xusuusin qurux badan
Ku calaamadee codka heesta arooska. Xidhiidhka dhexe wuxuu sameeyaa Uvula (Gabalka maqaarka ee u sudhan hunguriga gadaashiisa dambe).
Caddaynta fikradda ganacsiga ee wajiga horumarinta ee khariidaynta iyo habka wax soo saarka loo helo
33. Istuudiyaha Nive Yoga
Ku calaamadee silsilad cusub oo istuudiyaha yoga ee GTA ah.
34. Xalka Hal-abuurka
Astaanta Xalka Hal-abuurka.
35. MAYA: ADIGA: ANIGA
36. Daryeelka Caafimaadka eeyga
Gacmaha kor iyo hoos loo dhigay iyo sawirka eeyga oo lagu sameeyay goobta taban.
Voltacon Beddelka hadda (adduunka oo dhan waxaa loo soo gaabiyaa AC) shirkadda.
38. Kalluumeysiga Smart-ka ah
Logo loo sameeyay dukaan internet kalluunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 39 Astaamo Hal abuur leh Fariimo qarsoodi ah